जवान छोरा गुमाएर वि’छि’प्त यो परिवारमाथि जातिय विभेद, ‘तिमीहरु कामी हौ’ भनेर कि’रिया बस्ने घर समेत दिइएन (भिडियो हेर्नुस्) – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/जवान छोरा गुमाएर वि’छि’प्त यो परिवारमाथि जातिय विभेद, ‘तिमीहरु कामी हौ’ भनेर कि’रिया बस्ने घर समेत दिइएन (भिडियो हेर्नुस्)
जवान छोरा गुमाएर वि’छि’प्त यो परिवारमाथि जातिय विभेद, ‘तिमीहरु कामी हौ’ भनेर कि’रिया बस्ने घर समेत दिइएन (भिडियो हेर्नुस्)
पोखरा । समर वहादुर सुनार दुवईमा थिए । पोखरावाट वैदेशिक रोजगारीका लागि दुवईमा गएका थिए । तर उनको दुवईमै निधन भयो । उनको निधनको खास कारण खुलेको छैन । त्यहाँवाट पठाएको पत्रमा भाइलाई ४ वटा रोग लागेको देखाइएको समरको दाईले बताए । समरको आफन्त पनि वैदेशिक रोजगारीको लागि दुवईमा रहेका कारण निधन भएको ११ दिनमा उनको दुवईमै दा ह सं स्का र गरियो ।
दुवईमै दा ह सं स्का र भएपनि नेपालमा उनको नाममा गरिने कि रि या का विषयमा भने गाउँमा वि वा द उत्पन्न भएको छ । एकातिर भाई गुमाउनुपरेको पी डा छ भने अर्को तर्फ उनको परिवारले कि रि या बस्ने ठाउँ पनि पाएनन् । उनीहरु बसेको ठाउँ नजिकै यस्तै विपतको बेलामा बस्ने कि रि या घर पनि छ । जसलाई सबैले प्रयोग गर्छन तर दाई मोहनवहादुर सुनार भाइएको कि रि या सोही घरमा बसेर गर्छु भन्दा पाएनन् ।
उनी कथित तल्लो जातको भएका कारण आफुले त्यो सुविधा नपाएको बताएँछन् । उनले भाईको उता निधन भएको थाहा पाएपछि मोहनवहादुरले चैतको २६ गते नै त्यो समाज घरको साँचो मागे । घर लामो समय बन्द भएका कारण फोहर होला सफा गर्नुपर्ने अवस्था भएका कारण उनले साँचो मागेका थिए । तर उनलाई साँचो नै दिएनन् । साँचो माग्दा समाज घरका सदस्यहरुले अनेक आनाकानी गरे । सबैसँग गु हार माग्दा पनि उनले किरिया बस्ने घर पाएनन् ।
आफुलाई केही ब्यक्तिले यो बाहुन क्षेत्रीले बनाएको घर हो कामीलाई बस्न दिइन्न भनेर भनेको मोहनले बताए । उनले सोही विषयमा गाउँका अन्य ब्यक्ति आफुसंग वि वा द गर्न आएको बताए । एकातिर भाई गुमाउनुको पी डा बोकेको मोहन माथि गाउँले नै त्यसरी आ क्र म ण गर्न आएपछि निकै दु ख लागेको बताए । उनले घरभित्र बस्न दिन्नौं, वाहिर अर्को छाप्रो बनाएर बस भनेर भने, उनले भने, म जातिय विभेदको पाठशाला बनाउन चाहन्नथें त्यही भएर म मानिन ।
उनले यस्तो वेलामा पनि आफु माथि पटक-पटक गाउँले झ ग डा गर्न आइरहने बताए । स्थानियले समाजघरमा बस्न नदिएपछि अहिले उनको परिवार आफ्नै घरमा कि रि या बसेका छन् । कि रि यापुत्री भवन (समाज घर) मा बस्न नदिएपछि घरमै बसेको उनीहरुलेब बताएका छन् ।
लकडाउनका बेला काठमाण्डौका रोडमा घट्यो आनौठो घटना, प्रहरी समेतलाइ बनायो हैरानी ! मान्छेले यति सम्म गर्न सक्ने रहेछन् !
पोलियो थोपाले को’रोना सं’क्रमणबाट जोगाउने अमेरिकी विज्ञहरुको दावी
कोरोना संक्रमित दाजुको मृत्यु संस्कार गर्न बैगलोर पुगेर फर्किएका भाईको संक्रमणबाटै मृत्यु
भारतबाट कोरोना संक्रमित काठमाडौँ पुगे, काठमाडौंका अस्पतालले भर्ना नलिँदा कोरोना संक्रमित एम्बुलेन्समै